Marc Ravalomanana “Tsy hanaiky hatramin’ny farany izahay”
PM Ntsay Christian “Ny filoha no tompon`ny teny farany”
Maro ny mpanara-baovao miandry amin`izay mety ho firafitry ny mpikambana eo anivon`ny governemanta.
Tabera Randriamanantsoa “Fa atao sangisangy ve ny fitantanana firenena e ?”
Nivoaka nanomboka ny faran`ny herinandro teo ny tolotrasa avy amin`ny fiadidiana ny repoblika.
Gadra politika « Manana manampahaizana, miaramila, vahoaka izahay ! »
Nihaona tamin’ny mpikamban’ny komitin’ny fampihavanana malagasy tetsy amin’ny biraon’ny CFM Ampefiloha omaly ny avy eo anivon’ny federasionin’ny gadra politika na FEDEP, tarihin’ny filoha nasionaliny, Henri Rakotomalala na Riribe.
Naina Andriantsitohaina “Tsy manam-pahavalo aho”
Tontosa omaly tamim-pilaminana sy fifanajana tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely teo amin’ny ben’ny tanàna teo aloha Rtoa Lalao Ravalomanana sy ny ben’ny tanàna vaovao Atoa Naina Andriantsitohaina,
Fitondram-panjakana Lany andro manazava, tsy miroso ny asa
Manomboka lany andro manazava sy mandresy lahatra ity fitondram-panjakana mijoro eto Madagasikara ity.
Famerenana fifidianana any Tsihombe Mandà mafy ny vahoaka
Araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana any amin’ny faritanin’i Toliara momba ny voka-pifidianana ben`ny tanàna tany amin’ny kaominina Tsihombe Androy, dia haverina ny fifidianana any an-toerana.
Mikorontana ny fanjakana Mitokona ny mpiasan’ny ministeran’ny jono
Mitokona ary mangataka ny tsy hikambana amin’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana intsony ny mpiasan’ny minisiteran’ny jono.
Rehefa jerena ny lisitra tamin’ny fifidianana solombavambahoaka sy ny lisitra tonga tamin’ny 27 novambra, dia misy elanelany be.
Maro no nanontany tena satria niova ny laharany. 272, ohatra, ny laharan’ny lehilahy iray tao amin’ny Birao fandatsaham-bato N°2 tetsy Antaninarenina. Dia tsy nokitihina ve izany ity lisi-pifidianana ity ? Ny voalazan’ny lalàna dia ny lisi-pifidianana tamin’ny 15 mey ihany no manan-kery fa ny ankoatr’izay tsy izy. Rehefa nokitihina ny lisitra, dia tsy ara-dalàna iny fifidianana, hoy i Marc Ravalomanana omaly. Misy miteny ny fomba nanaovana azy mihitsy ny mpikirakira hoe misy olona 3 nesorina dia nampiana olona 8, raha ny tatitra nataony. Sao dia mihevitra anay ho tsy mahalala na inona na inona ary tsy manaraka ny toe-draharaham-pirenena ianareo ? Efa nilaza aho fa tsy hamela irery ny vahoaka malagasy ary tsy hamelantsika raha tsy hitantsika ny marina, hoy izy. Na inona na inona holazainareo amin’ny voka-pifidianana dia hamarino aloha, lazao aloha fa tsy nisy nikitika io lisitra io raha sahy ianareo, hoy ny hafatra niantefa tamin’ny CENI. Nambarany fa efa nilaza tamin’ny Vondrona iraisam-pirenena izy fa tsy mahaleotena io satria tsy ao ilay I (Independent) fa CEN fotsiny. Notsindriany fa tsy teto Antananarivo ihany fa nanerana ny Nosy ny hosoka. Tena hijoro aho ary hijoro hatramin’ny farany. Ampanjakao ny marina ary aza fitapitahina sy verezin-jo ny olona ary hajao ny safidiny. Mahalala tsara ny olona tokony hitondra azy ny vahoaka, ary eto Antananarivo ianareo no hilaza hoe izao ny vokatra eto, ka tena diso be izany. Nihaona tamin’ireo mpikirakira aho, ary nanitrikitrika izy ireo fa nokitihina io, ka dia milaza izahay, fa misy ny Malagasy sahy mijoro sy milaza ny marina fa feno hosoka, tsy lavorary, tsy nandeha tamin’ny fahamarinana iny fifidianana iny, hoy i Marc Ravalomanana niantso ny vahoaka hoe nampieritreritra hoe: hijoro sa mbola hanaiky lembenana ihany.